Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Dentures သွားအတု ပြဿနာ
Dentures သွားအတု ပြဿနာ
ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့်အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ ငယ်ငယ်က သွားကျန်းမာရေး ဂရုမစိုက်ခဲ့တော့ အံသွားတွေ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်လောက်က ကျွန်တော့်အံသွား တစ်နေရာတွက် သွားစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သတ္တုသွားနဲ့ စိုက်ခဲ့တာပါ၊ အဲဒီ ပျက်စီးတဲ့ သွားတစ်ချောင်းတွက် အသေစိုက်နည်းနဲ့ စိုက်တော့ တခြား အကောင်းနှစ်ချောင်းပါ ပါသွားပါတယ်။ အဲဒီသွားတွေ စိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော့် ဆံပင်တွေစ ဖြူလာပါတယ်၊ အခုဆို တစ်ခေါင်းလုံးနီးပါး ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ဖြူနေပါပြီ။
ရွေ၊ ငွေ၊ ကြွေ၊ သတ္တု အဲဒီသွားတွေ စိုက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးမှာ ဆံပင်ဖြူတာပါလား သိချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ နယ်ဘက်မှာ အသက်က ၃၅ လောက်နဲ့ တစ်ခေါင်းလုံး ဖွေးနေသူ အသိတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သတ္တုသွားစိုက်ထားတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတော့၊ အဲလိုများ ပတ်သက်လားဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ နောက်ပြီး ကာကွယ်ဘို့ တွက်လေးလည်း အကြံပေးပါဦး။ နှုတ်ပြစ်ပြီး တခြားဟာ ပြောင်းစိုက်ရရင် ကောင်းမလား မသိဘူးဆရာ၊ အကြံပေးပါဦးဗျာ။ အခု ကျွန်တော်က တခြားနိုင်ငံမှာ ရောက်နေတော့ ဆေးခန်း ပြတာလည်း ဘာသာစကား အခက်အခဲနဲ့ အနည်းငယ် ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဦးဆရာ။
ရေးပြတာက စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်။ သုတေသန ဆန်ဆန်လေး။ “သတ္တုအဆိပ်သင့်တာ မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး” ထင်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက သွားအတု အဆိပ်သင့်ခြင်းစာ ရှာတာ မတွေ့ရသေးဘူး။ မဖြစ်တာလား၊ သုတေသန မလုပ်တာလား၊ တခုခုဘဲ။
ဆရာ့ အမျိုး သွားအထူးကု ဆရာဝန်ကို လှမ်းမေးတယ်။ သူက ဗမာပြည်ကနေ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ ပညာဆက်သင်၊ အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာမို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရော သူများဆီကပါ စာတွေ့-လက်တွေ့ရှိသူပါ။ သွားအတုနဲ့ ဆံပင်ဖြူတာ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှု မရှိနိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ တခြား ဆံပင်ဖြူစေတဲ့ အကြောင်းတွေကိုဘဲ စဉ်းစားရမှာပေါ့။
There is no direct related reaction of the metal steel crowns, which is very old technique still using in Burma to go for cheaper way to grayish hair problem. Technically, there is also no direct reaction from steel dental crowns causing grayish hairs. That will be just coincident. There might be due to other systemic conditions such as aging, malnutrition, stress, taking other medicines and other factors causing decreased melanin cell production. Please just give general health education and that case is notadental material related problem.